အကယ်ဒမီရသွားတဲ့ကားက တရုတ်ဇာတ်လမ်းကိုခိုးထားတာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အကယ်ဒမီရသွားတဲ့ကားက တရုတ်ဇာတ်လမ်းကိုခိုးထားတာ
Posted by ဦးသု on Jan 2, 2013 in News | 19 comments
ကဲအဲလိုတွေ ကော်ပီကူးချထားတဲ့ ထာဝရအလင်းတန်းများဆိုတဲ့ ကားကို အကယ်ဒမီတွေပြွတ်သိပ်နေအောင်ပေးချလိုက်တော့ ကောင်းကြသေးရဲ့လား ။
ပေးတဲ့သူကလဲ ဘာမှမလေ့လာပဲပေး။ ဆုတက်ယူတဲ့သူကလဲ ခပ်ပြောင်ပြောင်ပဲ အရှက်မရှိတက်ယူ။ ဦးဇင်ဝိုင်း ကြီးလက်ထက်ကျမှပဲ ပိုဆိုးတော့တယ်။ ကျော်ဟိန်းတို့ ကျော်သူတို့ ခေတ်တုန်းက ဦးကျော်သူဆိုရင် အကယ်ဒမီကို ခက်ခက်ခဲခဲ ယူခဲ့ရတာ။ အဲဒီကားကို 5MOVIE မှာလဲပြပြီးသွားပြီ ။ ကဲနောက် နှစ်ကျရင် တော့ ကျွန်တော်လဲ အော်စကာမင်းသားကြီး TOM HANKS ရဲ့ FORREST GUMP ဆိုတဲ့ အော်စကာ ခုနှစ်ဆုရတဲ့ ဇာတ်ကားကို ကော်ပီလုပ်ပြီး ရိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားရတော့မယ်။ ရွာထဲက သူတွေနဲ့ပဲရိုက်မယ်ဗျာ အဲဒီကားကြည့်ဖူးရင် ဘယ်သူ့နေရာကသရုပ်ဆောင်မလဲ အောက်မှာ စာရင်းပေးသွားကြ အကယ်ဒမီရချင်ရမှာနော် ။
ဇာတ်ကားနာမည်က The Road Home ပါ ဓာတ်ပုံတင်တယ်ဗျာ မပေါ်ဘူး ကွန်နက်ရှင်ကလဲ မကောင်းလို့ပါ အပေါ်က ဖေ့ဘွတ်ခ် လင့်မှာ ဝင်ကြည့်လိုက်ပါ။
http://www.youtube.com/watch?v=48ivIU6Szok ဒါက You Tube ပါ
eleven က သတင်းပါ
ကိုမာဂ ရေ ဒီနှစ်လဲ ဟာသကားတွေ များပြီး ဒရာမာ နဲ့ အဆင့်မှီ အက်ရှင်တွေ ကိုမျှောလို့မရသေးပါဘူး တစ်ကားတစ်လေထွက်လာတဲ့ ဒရာမာ အစုတ်ပြတ်တွေပဲ အကယ်ဒမီပေးရအုံးမှာပါ။
မကောင်းတာတွေထဲကမှ အကောင်းဆုံးကို ရှာပေးရသလို ဖြစ်နေသဗျ
ဘယ်လိုပဲ ရရ … ဘယ်လိုပဲ ယူယူ …
အကယ်ဒမီတော့ ရယူသွားကြပြီ ….။
ဒီဆုတွေကို ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းမှာလည်း မဟုတ်ဘူး …။
ပြီးတော့ … ကျုပ်တို့ မြန်မာ အများစုက ခိုးချတာ အတော်ဝါသနာ ပါကြတယ် ..
ကျန်တဲ့ဘက်ကိုတော့ သိပ်မပြောတတ်ဘူး …
ကွန်ပျူတာ နည်းပညာ ဘလော့ဂ်ပိုင်း ဆိုင်ရာမှာတော့ …
သူများက ကြိုးစားပမ်းစား ရှာဖွေစုဆောင်းပြီး ရေးသားထားတာတွေကို
ခပ်တည်တည်နဲ့ သူရေးသလိုလို ဘာလိုလို ခိုးထားတာတွေ အများကြီးပဲ …….။
မြန်မာလူမျိုး အများစုဟာ သောက်ခွက် တော်တော်ပြောင်တဲ့ တခိုးဒွေဘဲ …
(အဲ့ဒီထဲမှာ မန်းဂဇက် ကလူတွေ မပါဘူးလို့ မှတ်ဘာ … ငွင်းး ငွင်းး)
လူထုရဲ့.. စိတ်ဓါတ်ရေးရာပိုင်းတွေ ..အတွေးအခေါ်တွေ.. လူ့ကျင့်ဝတ်တွေ.. ယဉ်ကျေးမှုတွေမှာ.. (လူအများစုကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြတဲ့..) ဘာသာရေးက..အင်မတန်လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ပါတယ်..
ငါးပါးသီလကြီး ငုတ်တုတ်ရှိရဲ့နဲ့.. ခိုးရဲ…ဆိုးရဲ.. ခိုးသူ..မရိုးသူတွေအရမ်းများလာကြတာဟာ.. ဘယ်နေရာမှားသလည်း..
မှတ်ချက်. . ။ ။.. ကိုယ်ဘာလုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုယ်သိကြမှာပါ..။ မရိုးမသားယူထားတဲ့ဆုကို.. ပြန်အပ်ပလိုက်ဟေ့…။ မြင့်မြတ်သူလို့..လူထုကအသိအမှတ်ပြုကြလိမ့်မယ်..။ :harr:
အမှားလုပ်မိရင် ၀န်ချတောင်းပန်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားအောင် စံနမူနာပြ လုပ်ဆောင်ကြဖို့ကောင်းတယ်။
ကာလကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှ လိပ်ပြာမသန့်တဲ့လုပ်ရပ်ကြီးက ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး အရိပ်မဲကြီးလို လိုက်နေတတ်တယ်။ :eee:
အကယ်ဒမီ ရသွားတဲ့ မင်းသား ကျွန်ုတော့တစ်ခါမှကိုမမြင်ဘူးဘူး။ အဲ့နေ့ကမှစမြင်ဘူးတာ။
အကယ်ဒမီရသွားတဲ့မင်းသားကို ရုပ်မြင်ဖူးဖို့မပြောနဲ့ နာမည်တောင် အကယ်ဒမီပေးပွဲနေ့ကမှစကြားဖူးတာပါ။
လုပ်ခွင့်ရတာနဲ့ မဆင်မခြင် လုပ်တာကော အဂတိ လိုက်စားတာကော ….တပေါင်းထဲ လုပ်ချလိုက်တာ..။
ကောင်းလာမလားလို့ နေရာပေးထားတာ ပြောစရာဖြစ်အောင် တနပ်စားလုပ်ချ လိုက်သလားဘဲ ။
နောင် ဆင်ခြင်စရာတွေပေါ့ ။
FORREST GUMP ကို ကော်ပီ လုပ်မလို.လား….အနော် မင်းသားလုပ်မယ်ဗျာ။
Life Visitor says:
ကော်ပီချို ဖမ်းလေဂျာ .. ဒါချို ကော်ပီ အကယ်ဒမီပေါ့နော်..:D
အတိအကျ မသိရင်လဲ မရေးပါနဲ့ လားဗျာ
ဘာလို့ အဲဒီလို ပြောရလဲဆိုရင် ၊ ခင်ဗျားဟာက “““ တစ်ဘက်လူ ဂုဏ်သိက္ခာကို စော်ကားတိုက်ခိုက်တဲ့ အနေအထားပဲဗျ ”””
နောက်ပြီး အဲဒီသတင်းဆိုတာ အရပ်ထဲက ပဲပြုတ်သည်တို့အကြော်သည်တို့ ပြောတဲ့ အသံမျိုး….
ဒါရိုက်တာ ကိုထွန်းအောင်ဇော် ကို ကော်ပီဆိုတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမေးထားတာကတော့
“ဒီဇာတ်ကားက ရုပ်ပြမိုးကြိုးရဲ့ဇာတ်လမ်းကို ရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ ရုပ်ပြမိုးကြိုးက လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်ကတည်းက ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။ အဲဒီတုန်းက ဒီတရုတ်ဇာတ်ကား မထွက်သေးဘူးထင်ပါတယ်။ အခုကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအဖြစ် ဖန်တီးရာမှာတော့ တရုတ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာပါတဲ့ ကျောင်းဆရာလေးက ကျေးတောသူကို ကလစ်လက်ဆောင်ပေးတဲ့အခန်းလေးကိုတော့ သဘောကျတာနဲ့ ယူသုံးထားပါတယ်။ ကျန်တဲ့ဇာတ်ကျောရိုးကတော့ မတူပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဇာတ်ကားတစ်ကားဖန်တီးတဲ့အပိုင်းမှာ ဒါရိုက်တာကပဲ စလယ်ဆုံးဖန်တီးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော့်မှာပဲ တာဝန်ရှိပါတယ်”
အခုအောက်က စာကတော့ ““မောင်ပေ”” ဆိုတဲ့ ကျုပ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စကားတွေပဲ
နောက်ပြီး တစ်ခုရှိသေးတယ် ၊ ပိုက်ဆံပေးလို့ … လိုက်လို့ ရတယ် ဆိုတဲ့ ခလေးလောက်တောင် အသိမပြည့်ဝတဲ့ စကားတွေပြောနေကြသေးတယ် ။ ဒါဆိုရင် ၊ ဒီနေ့လူငယ်တွေတိုင်းလိုလို သိနေကြတဲ့
အိန်အိန်း တို့ ၊ နေရဲမာန် တို့ ကို အကယ်ဒမီ ပေးရမှာလားလို့ တောင် မေးရမလိုလို…..
“““ ဒရမ်မာ ဆိုရင် ၊ ဝင်ငွေနဲလို့၊ ရုံတင်ရင် ကြည့်မယ့်လူနဲ လို့၊ ဟာသကားတွေနဲ့ ပဲ လုပ်စားနေတဲ့ ဒီနေ့ ခေတ်ထဲမှာ ၊ ငွေကြေးအရကော ၊ သရုပ်ဆောင်အရပါ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ကြီးကြီးနဲ့တည်ဆောက်ပြီး ပရိသတ်ကို ဖျော်ဖြေတဲ့ ဒရမ်မာ ကားကို အကယ်ဒမီပေးတာကို မကျေနပ်ကြရင်လဲ …. ”””
ရွာထဲမှာ ကိုသုရှင် နဲ့ သုဝေ ဆိုပြီး နာမည်၂မျိုးရှိတာကို သေချာမကြည့်ပဲ
ကိုသုရှင် နာမည် ကို မှားပြောမိလို့၊ ကိုသုရှင်ကို တောင်းပန်ပါတယ် ခင်ဗျား
မြန်မာကား ” ထာဝရ အလင်းတန်းများ ” ကော ၊
တရုတ်ကား ” The Road Home (1999 film) ” ကော ၊
ရန်ကုန်ရောက်မှ နှစ်ကားလုံး ငှားပြီး ယှဉ်ကြည့်လိုက်ဦးမယ် ။
ဘယ်သူ က ဘယ်သူ့ကို ၊ မှီး မမှီး တော့ မသိဘူး ။
တရုတ်ကား ” The Road Home (1999 film) ” က Wiki မှာတောင် စာရင်းပေါက်တယ် ။
ရထားတဲ့ ဆုတွေကလည်း မနဲ မနှောပဲ ၊
နိုင်ငံတကာ ဆုတွေတောင် အများကြီး ရထားတာပဲ ။
ဒို့ အဘဖောက တရုတ်ကြီးအကြောင်း တော်တော်နောကြေနေအောင် လေ့လာထားတာပဲ၊
ဇတ်လမ်းကျောရိုးတူတာသက်သက်ဆိုရင် အဲဒါ ခိုးချတယ်လို့ အပ်ချမတ်ချ စွပ်စွဲဖို့ခက်ပါတယ်။
လောကမှာ ရုပ်ပြ၊ ကာတွန်း၊ ပုံပြင်၊ ၀တ္ထု၊ ပြဇတ်၊ ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယို …
စတဲ့ မီဒီယာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ဇတ်လမ်းပေါင်း သန်းပေါင်းများစွာချီ ရှိပါတယ်။
သောင်းချီပြီးတောင် ရှိနိုင်ပါ့မလား မပြောတတ်ဘူး…..
ဒါကြောင့် ဇတ်လမ်းကျောရိုးသက်သက်က အလွယ်တကူ တိုက်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
နောက်တခုက မှီးတာဆိုရင် အဲဒါ မှီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ ကိန္နရာမောင်နှံ လက်တွဲပျံနေတဲ့ပန်းချီကို ဆွဲရင်
အဲဒါ အရင်ဆွဲဖူးတဲ့လူရဲ့အိုင်ဒီယာကို မှီးတာလို့ ပြောချင်ပြောလို့ရပါတယ်။
အရင်ဆွဲဖူးတဲ့သူကို ခိုးချတာလို့တော့ မပြောထိုက်ပါဘူး…။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိန္နရာဆိုတာ ပုံပြင်ထဲမှာ ဟိုလူမဆွဲခင် နဂိုကတည်းကရှိတာ…..
ဟိုလူက မွေးလို့ ဖြစ်လာတာမဟုတ်လို့ပဲ…။
ခိုးတဲ့ကိစ္မ ဘေးဖယ်ထားဥိး အကယ်ဒမိပေးရ
လောက်အောင် တန်းမဝင်တာတော့ အမှန်ပဲ
ခေတ်တွေပြောင်း လူတွေပြောင်းလို့ 